Sary: Rollande Rosie
Miisa 15 ireo vehivavy voafonja ao amin’ny fonjaben’i Tolagnaro. Nanatitra fanampiana ho azy ireo ny « Vehivavy 8 Marsa » ka androany alarobia 4 martsa maraina ny solontena no nanatira izany teny an-toerana. Nahitana lamba, savony, vary, poketra, tatinono, menabolo ny fanomezana, izay voaangona nandritra ny hetsika « Hanampy ny Hafa Aho ». Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny 8 martsa, Andro manerantany ho an’ny Vehivavy ity hetsika nataon’ny fikambanana « Vehivavy 8 Marsa » teto Tolagnaro ity. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Ministeran'ny Mponina Madagasikara
Mitohy ny Rodobe ho an'ny fahasalamana sy ny zon'ny vehivavy. Hetsika natao ho fanomanana ny Andro Maneran-tany ho an'ny Vehivavy. Taty amin'ny Kaominina Vinaninkarena, Distrika Antsirabe II, Faritra Vakinankaratra no natao ny hetsika androany 2 martsa 2020. Nizara lay hoan'ireo vehivavy lehibe sy mitaiza kely ny Ministeran'ny Mponina, ary nanao fanentanana mahakasika ny ady amin'ny herisetra sy ny zon'ny vehivavy ary ny miralenta. Nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana sy ny toro-hevitra momba ny fahasalamana, ary ny fitiliana ny homamiadan'ny nono, ny vozon'ny tranon-jaza,ny diabeta, ny VIH-SIDA ary ny tazomoka. (Jereo Sary Tohiny)
Mpampianatra amin’ny sekoly tsy miankina maherin’ny 34 500 manerana ireo Faritra 22 no hisitraka fanampiana ara-bola na « subventions des enseignants », ary sekoly tsy miankina miisa 1 670 no ahazo ny « Allègement des charges parentales » na fanamaivanana ny vesatr’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra ho an’ireo sekoly tsy miankina amin’ny fanjakana. Anisany masontsivana napetraka ahafahan’ireo sekoly tsy miankina misitraka ireo fanampiana ireo ny fananana saram-pianarana latsaky ny 800 Ar, ny fananan’ny mpampianatra fahazoandalana hampianatra (Attestation d’Enseigner), ny fananan’ny sekoly fahazoandalana hisokatra (Attestation d’Ouverture). Natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany ny fizarana ny taratasim-bola ho an’ny faritra Analamanga ary hitohy manerana ny nosy izany. (Loharanom-baovao: Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa) (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 01 mars 2020 22:57
8 martsa Andron’ny vehivavy: Toliara no hampiantrano ny fankalazana nasionaly
Ny tanànan’i Toliara no toerana hanatontosana ny fankalazana nasionaly ny 8 martsa, Andro maneran-tany ho an'ny vehivavy amin’ity taona 2020 ity. « Izaho sy ianao, isika rehetra miombon'andraikitra hisitrahan'ny vehivavy ny zony », no lohahevitry ny fankalazana. Natomboka androany 1 martsa 2020 tao amin'ny Kaominina Ambohimandroso, Distrika Antanifotsy, Faritra Vakinankaratra ny rodobe hetsika voalohany nisantarana ny fankalazana io Andro maneran-tany ho an'ny vehivavy io. Nisy ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho an'ireo mponina tao an-toerana. Hitohy mianatsimo miazo an’i Toliara ny hetsika. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 01 mars 2020 19:21
Luxembourg: Maimaimpoana ny fitateram-bahoaka
I Luxembourg no firenena voalohany mitatitra maimaimpoana ny mponina ao aminy. Tapakila ho an’ny teratany vahiny mandalo ao sy tapakila ho an’ireo toerana sokajy voalohany no andoavam-bola fa dia maimaimpoana ny ankoatra izay, na handeha lamasinina ianao na « bus » na tramway. Nanomboka tamin’ny volan aogositra 2018 no efa nisitraka an’ity sarandalana maimaimpoana ity ny tanora latsaky ny 20 taona, fa nitarina ho an’ny daholobe izy ankehitriny ary nihatra nanomboka ny 29 febroary 2020 no sarandalana maimaimpoana amin’ny fitateram-bahoaka io.
jeudi, 27 février 2020 21:54
Fitsaboana eto Madagasikara: Hitsangana tsy ho ela ny “Centre de transplantation rénale”
Nitohy tao amin’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fivoriana nifanankalozana ho fijerena vahaolana hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon’ireo ministera izay niarahan’ny Praiminisitra, Ntsay Christian sy ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ity sampandraharaham-panjakana izay tarihin’ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ity. Noresahana nandritra izao dinik’asa izao ny fanatsarana ny kalitaon’ny fitsaboana amin’ny ankapobeny fa indrindra ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa mba hifanaraka amin’ny filàn’ny vahoaka.
jeudi, 27 février 2020 21:29
Loharanom-baovao: Région Menabe
Morondava: Tonga ny fanampiana ho an’ireo traboina
Fonkotany miisa dimy eto Morondava no dibo-drano tanteraka dia Ampasy, Ankisirasira, Tanambao, Andakabe ary Morondava Centre tao aorian’ny nandalovan’ny andro ratsy izay nitondra rotsak’orana be teto amin’ny Faritra Menabe, izay nitarika fiakaran’ny reniranon’ny Kabatomena, ka vaky ary nitambatra tamin’ny fiakaran’ny ranomasina ka nitarika tondran-drano teto Morondava ny fiandohan’ity herinandro ity. Nisy ny rava trano, tafakatra 2 205 traboina sy tsy manan-kialofana, avy amina fianakaviana miisa 441. Nidina, nijery ny zava-misy sy nankahery ny traboina ny solontenam-panjakana izay notarihin’ny Minisitrin’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, sy ny Minisitrin’ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny vehivavy ary ny Minisitrin’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena, androany alakamisy 27 febroary 2020.
mercredi, 26 février 2020 11:26
Loharanom-baovao: Gouvernorat Itasy
Pâquerette: Niditra ny varavaran’ny sekoly indray ity atleta sahirana ara-pivelomana ity
Rafarasoa Niaina Pâquerette no anarany feno, i Pâ no fiantson’ny fianakaviana sy ny mpiara-monina aminy azy. Atleta manana ny maha izy azy i Pâ, efa tompondaka tamin’ny sokajy taona aminy izy ny taona 2018 amin’ny hazakazaka 8km. Sahirana ara-pivelomana ny ray aman-dreniny. Tsy afaka nanohy ny fianarany i Pâ noho izany. Noraisin’ny Governoran’Itasy, Jeneraly Andriamanana Maherizo an-tanana ny famerenana indray an-tsekoly an’ity atleta sahirana ara-pivelomana ity. Ny 25 febroary 2020 i Pâ no niverina nandingana ny varavaran’ny sekoly indray, hanohy ny kilasy T3, rehefa nandao izany ny taona 2017. Tonga nanatitra azy tao amin’ny EPP Mangarivotra ao Miarinarivo ny Governora sy ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fanofanana teknika sy arak’asa Itasy niaraka tamin’ireo ray aman-drenin’i Pâ. Nilaza ny Governora fa hanohana an’i Pâ hatrany amin’ny fianarana ataony ary hanaramaso ny fahazotoany sy ny vokatra azony. (Loharanom-baovao: Gouvernorat Itasy) (Jereo Sary Tohiny)
Page 6 sur 211